Auto Fabrica dia manamboatra bikes manokana ho an'ny galeran'ny MB & F.
Cars & Motorcycles Môtô
Ny roa amin'ireo bisikileta mahagaga indrindra dia hajainao
Fampahafantarana ny Mpiasan'ny Auto Fabrica ho an'ny MB & F MADGallery
Ireo mpamboly bisikileta Gazmend Muharremi sy Bujar Muharremi miaraka amin'ny zavakanto roa-wheeled. Jonathan Fenton
Auto Fabrica dia volavolan-tselatra britika britanika mavesatra indrindra izay manamboatra môtô kanto malaza. Ny famokarana bisikileta 8 hatramin'ny 12 isan-taona dia mampiasa ny foiben'izy ireo any Londres ny ekipa mpiray tsikombakomba ao Bujar sy Gazmend Muharremi mba hanova endrika bisikileta mahazatra ho lasa zavakanto roa-kodiarana.
Ireo motozy roa manokana - Ny sokajy 6 sy ny sokajy 8-- dia mendri-piderana tsy hoe noho ny fananganana tanteraka (efa naharitra enim-bolana ny famoronana azy tsirairay), fa noho izy ireo dia tena novolavolaina sy natsangana. Amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny tsindrim-peo avy amin'ny tsindrin-tsarimihetsika atao hoe Ettore Bugatti , ireo rahalahy dia mampiasa ny anarana nomena anarana hoe "karazana" mba hamaritana ny tsirairay amin'ny zavaboariny, tahaka ny nataon'i Mr. Bugatti.
Ny karazany 6 dia nanomboka ny fiainana tamin'ny 1979 Yamaha XS650, ary ny karazana 8 dia tamin'ny 1981 ny Honda CX500. Andeha hojerentsika akaiky ireo bisikileta roa tena tsara indrindra ireo.
Auto Fabrica Karazana. 6
Ny Karazan'ny Auto Fabrica 6. Julien Brightwell
Ireto misy sombin-tsary momba ny endri-javatra 6. Andao jerena akaiky ny toerana ao ambadiky ny tank sy ny kitapo, ary hahita tavoahangy bitika kely ianao. Io toerana io dia ny fitaomam-panahin-tsakafo ho an'ny bisikileta iray manontolo, ary natao tany am-boalohany ho toy ny fitaovana famokarana rivotra ho an'ny motera. Na izany aza, ny endrika dia nahitana akanjo maitso kokoa noho ny tany am-boalohany, noho izany dia nihena io fihetsika io ho an'io fihetsika io. Mba hisorohana ny fomba fijery manjavozavo, ny tank sy ny toeram-pivarotana dia natao tamin'ny alalan'ny fanondranana tanana maromaro vita tanana.
Raha toa ny sasantsasany amin'ireo singa ireo dia azo fantarina avy amin'ny bisikileta fanomezana, ny singa amin'ny môtôzy dia samy vita tanana. Ohatra, ny tranobe, ny entana sy ny gidra, ny baran'ny barika vita amin'ny rindrina, ary ny gidro rehetra dia samy noforonin'ireo mpanao trano. Natsangana indray ny motera tamin'ny fampiasana sompitra 0.5-oversize, ary ny fantsom-bokatra sy ny aliminiara rehetra dia nipoitra tamin'ny ranomainty.
Ny famelomana ny fahaiza-manaony manokana dia nahafahan 'ireo rahalahy nanamboatra toeram-pitsangatsanganana ho an'ny tenany manokana, izay ankoatra ny saran-dàlana natsangan'ireo mpampiasa azy. Saingy alohan'ny handehanana eny an-tanan'ny bisikileta, ny Bujar sy ny ekipany dia mandany fotoana maromaro eo amin'ny famolavolana, manomboka amin'ny famolavolana ny tanana sy ny mandeha mankany amin'ny Photoshop fampisehoana mba hanao bisikileta virtoaly alohan'ny hanombohan'ny asa fanehoana fitiavana.
Auto Fabrica Tipo 8
Ny Karazan'ny Auto Fabrica 8. Jonathan Fenton
Ny Auto Fabrica Type 8 dia miorina amin'ny Honda CX500 tamin'ny 1981, ary mampiasa tavoahangy matevina avo lenta, mba hamoronana endrika hafa amin'ny fomba ofisialy 6. Ny asa ataon'ny rahalahy dia ampahafantarinay ny famoronana miavaka tamin'ny taonjato faha-20. "" Nanomboka ny dingana nataonay tamin'ny teknolojia maoderina izahay ary tena mijery ny milina tsara tarehy, "hoy izy ireo." Fotoana sy fotoana izao dia tonga tamin'ny famaranana mitovy: ireo fiara dia nihevitra fa ny tsara indrindra sy lafo indrindra dia ny fiara sy bisikileta avy amin'ny vanim-potoana volamena eo anelanelan'ny 1910 sy ny taona 1980. "
Ny fiasan'ny ordinatera Auto Fabrica dia mila asa be dia be. Julien Brightwell
Ny rahalahy mahaleotena dia manao ny tetibidiny sy mamolavola azy. Na dia niforona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2013 aza ny orinasa dia efa ela no niasa ny orinasa. Ny fahasarotana amin'ny famoronana ireny bisikileta ireny dia avy amin'ny hoe maro ireo teknika ireo no "very" amin'ireo mpanao asa tanana maoderina - izany hoe, ny sehatra fahaiza-manao dia tena voafaritra fa mila fitsapana kely sy fahadisoana ny tonga amin'ny fomba tsara atao zavatra.
Ahoana ny fiarahan'ny rehetra?
Ny endriny sy ny fampisehoana dia manentana ny tena zava-misy. Julien Brightwell
Ny famelomana ny fahaiza-manaony manokana dia nahafahan 'ireo rahalahy nanamboatra toeram-pitsangatsanganana ho an'ny tenany manokana, izay ankoatra ny saran-dàlana natsangan'ireo mpampiasa azy. Araka ny azonao eritreretina, misy fiomanana kely izay miseho ao an-tsaina sy manangana ireo zavaboary tsara eritreritra ireo. Ny ekipan'i Bujar Muharremi dia manomboka amin'ny endriky ny tanana, avy eo dia mamorona sarimihetsika Photoshop mba hamorona ilay bisikileta amin'ny toerana virtoaly alohan'ny hanombohan'ny asa sarotra.
Amin'ny tranga misy ny Type 6 sy ny Type 8, ireo fambolena roa ireo dia aseho ao amin'ny MADGallery any Genève, Soisa, izay ahitana mpizaha fahitalavitra ambony Max Busser mampiasa tetikasa famoronana fiaraha-miasa mba hankalaza ny karazana kinetsika rehetra. Raha liana amin'ny fananana iray na roa amin'ireto bisikileta tena marefo ireto ianao, dia azo atokisana amin'ny CHF 80,000 (na $ 83.300 USD, amin'ny fihenam-bidy ankehitriny.
Inona no tokony ho fantatra momba ny AMA Pro Track Racing Racing
10 Zavatra atao amin'ny Week Bike Bike Daytona
Ny Mpiavonavona 10 Mianjera Manerana Izao
Ireo fahadisoana fahadimy mahazatra indrindra amin'ny Motorcycling
Fanombohana: Ny Dingana Voalohany Mitaingina Môtô
Ny Fomba Hanajan'ny Biby Ny Hoavin'ny Mpiaro Ny Mpiambina?
Ny lalam-bisikileta tsara indrindra any Amerika
10 Torohevitra momba ny fomba hitsenana gazy amin'ny môtô
Ny maha-zava-dehibe ny seza môtô
Fanomezam-boninahitra amin'ny teny Frantsay: Bonjour, Salut, Bonsoir + Kolotsaina
Fomba hahitana ny hevitra fototra voavaly
Ny hetsi-panoherana, ny mpanao gazety, ary ny fomba ambaran'ny Amendment voalohany ao amin'ny Colleges
Ny Misionan'i Cassini ho Satin
Phonesthemes: Teny sy feo
Inona no fahasamihafana eo amin'ny osmose sy ny diffusion?
Stereotypes an'ny Amerikanina Italiana amin'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra
Nahoana ny mpitaingina bisikilety no manaratra ny tongony?
Nancy Pelosi: Biography and Quotes
Bonnie sy Clyde
Mandra-paharetana ve ny menaka volon-koditra mila alaina alohan'ny hampiharana azy?
Ny fivoaran'ny fo
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba 4WD
Ejipta Ejipsiana - Tari-dalana ho an'ny alahelon'i Ejipta voalohany
Teny sy fitsipika pagan
Iza no mihira inona amin'ny "Walk The Line" Movie Soundtrack?
9 claves ho an'ny karatra maitso amin'ny VAWA ho an'ny fiarovana an-trano vy
Fantaro ny fomba fampiasana ny fepetra Frantsay
UCF GPA, SAT ary ACT Data